Salman Khan iyo Bobby Deol waxay noqon rabaan Amitabh Bachchan iyo Amjad Khan xigaan ee Bollywood-ka – Filimside.net
Salman Khan iyo Bobby Deol waxay noqon rabaan Amitabh Bachchan iyo Amjad Khan xigaan ee Bollywood-ka
Qof walbo wuxuu ka warqabay xiriirkii wacnaa ee shaqo iyo mid nololeed ee ka dhaxeeyay Amitabh Bachchan iyo Amjad Khan 70-maadkii iyo 80-maadkii ayagoo isla sameeyeen aflaan badan oo caan ah sidoo kalena Classic ah ganacsi ahaan iyo sheeko ahaan.
Haatan waxaa la sheegay Amitabh Bachchan iyo Amjad Khan cusub Bollywood-ka in laga dhex heli rabo waana Salman Khan iyo Bobby Deol oo noqdeen saaxiibo isku dhaartaan kadib shaqadii Race 3 ku dhex martay.
Waxaa la sheegay in Salman uu Bobby ula baxay magaca Mammu xili walbana uu ugu yeero sii ugu dhiiri galiyo maalin walbo sameynta jirdhis joogto ah.
Ka hor Race 3 Bobby Deol waligiis iskuma dayin inuu jirkiisa dhiso laakiin Salman ayaa ku dhiiri galiyay wuxuuna haatan ka helay hadal heyn xoogan Bobby sida uu jirka u dhistay una noqday jilaa saxaafada soo jiito.
Kooxda Race 3 ayaa ka yaabtay is fahanka dheeraadka ah ee Salman iyo Bobby dhex yaalo kuwaas oo aan kala harin xitaa xiliyada aysan shaqo ku jirin.
Salman ayaa laga soo xigtay hadda kadib filim walbo ee uu sameenayo inuu door wacan ka siin doono Bobby waana sababta keentay in haatan shabakadaha Bollywood-ka labadaan ugu yeeraan “Amitabh Bachchan iyo Amjad Khan cusub ee Bollywood-ka”.
Sidoo kale Salman wuxuu muuqaal marti ah hal hees u aqbalay inuu filimka Yamla Pagla Deewane 3 ugu yeesho Bobby Deol asigoo rabo filimkan Dharmendra iyo Sunny Deol wax ka jilayaan hadal heyntiisa noqoto mid aad u sareyso.
Filimka Race 3 waxaa la sheegay in Salman iyo Bobby lid isku yihiin isna qayaami doonaan waxaana filimkan weyn oo ay wax ka jilayaan Jacqueline Fernandez, Saqib Saleem, Anil Kapoor, iyo Daisy Shah la daawan doonaa 15 June 2018.
Waxaa Aqrisay 1,327